Icala labesetyhini ngomntu
Kulula kangakanani ukuvumela ukuba ukhubekiswe: ukukhupha, ukuchukumisa nokubukeka umthumeli wakho ngokuzenzekelayo ... Cinga ngako, awuyi kudla ukusetyenziswa kwesiphambeko njengesikhali ukuphumeza naziphi na iinjongo? Ingcali yengqondo iza kukunceda ukuba uqonde into engafanelekanga, kutheni kuvela nokuba njani ukujongana nayo.
Ikati yam, esesemncinci kwaye engenzile, xa ekhubekiswe yinto ethile, yaxelela amalungu omndeni le ngcaciso, ebhala kwizihlangu zomntu ophulukisayo. Ngoko ngokuqinisekileyo sazimisela isigqibo.
Emva koko iingcinga zaqala: yintoni na iwayini? Uhlalutyo lwendlela yokuziphatha kwekati inokuthatha ixesha elide, kuba wayengenako ukusitshela ngezizathu zokunganeliseki ngokuthe ngqo.
Ngokuqhelekileyo, ukuba uqikelelo luye lwachaneka, zonke ezinye izihlangu ziya kugcinwa, kwaye ukuba kungenjalo, ke ... kodwa le ngxelo edabukisayo.
Ngamanye amaxesha kubonakala ngathi abantu abaninzi baziphatha ngendlela efanayo neekati ezikhubekileyo. Kwaye abo banomdla ngabo bafana nabanini, balahlekelwa ngombono kwaye baxhamla iziqwenga ezikhethiweyo zekati ngethemba lokuba baxakeke ityala labo elingenakuqondakala.
Kutheni abantu bekhubekiswa nonke? Kutheni abesetyhini banokusabela ngokusabela ngale ndlela, kwaye oku kukhokelela ntoni?
Makhe sijonge ezinye zezizathu zokuvela kweentyala kwaye sibone indlela oku kusebenza ngayo le ndlela.
Isizathu # 1: ukudana
Xa ububala into ethile, kodwa ngenxa yesizathu esithile awuzange uyifumane, lixesha lokukhubeka.
Mhlawumbi umoni akwazi nokuba ucela into ethile, kodwa akunandaba, kuba lowo waphukisa kuqala ulungile.
Umzekelo, uhleli e-yokutyela, kwaye umchasi uqwalasela ngokucokisekileyo imenyu, okanye, ngakumbi, nomntu onomdla ngokuthetha.
Uqala ukuthula uze wenze ubuso obukhubekileyo. Kungenzeka, emva kwexesha umoni uya kuqala ukubuza:
- Yintoni na le nto? Kwenzeka ntoni?
"Hayi, kulungile," uya kuphendula, ngokusuka kuye ngokungaqhelekanga.
"Kodwa ndibona into eyenzekayo!"
- Nawe ke, awunacingi?
Buhlungu! Ingqwalasela ekulindelwe ixesha elide ifunyenwe, ungaqala ukucacisa ubuhlobo!
Ngoko, abafazi bathanda ukukhubeka, kuba ukuhlambalaza kuquka ukuziva ukuguquka kunye netyala kumntu owonayo. Kwaye ukuba enze le ngxaki, yena, ngokwemeko, kufuneka enze into enhle.
Umbuzo uvela - kutheni ungafuni nje ukubuza malunga nento oyifunayo? Kulula ukuthetha!
Nguwuphi na umfazi onengqondo yakhe elungileyo uza kucela umntu ukuba amthande ngakumbi, unakekele ngakumbi, emva kwayo yonke into, umthobele, kuba uyakhathazeka xa uthetha ngefowuni?
Ngokomzekelo, uLarissa wayehlala ekhubekile ngendoda yakhe encinci ngexesha elithile.
Ukuba ulwalamano lwaba luzolile, uLara wagcwala uxinzelelo kunye noloyiko lwakhe-kwaye ngokukhawuleza wayeka uthando?
Kwakudingeka ahlale elawula ulwalamano, kwaye kwiimeko apho ulawulo lwalulahlekile, uLarissa waqala ukusebenza.
Xa umntu owayengalindelekanga wamxelela uLarisa ukuba wayengenakuchitha ixesha lokuhlwa kunye naye ngenxa yomsebenzi, wacaphukisa ngoko nangoko.
Ngamanye amaxesha ibali elifanayo liphindaphindiwe - akazange afune ukuthetha naye, wayecima ifowuni, kwaye ukuba unesihlwele esasamfumana, wathi wayexakekile kwaye wayeka ukuthetha.
Lo mfana wayengenakuqonda into eyenzekayo. Waqala ukuziva enetyala kwaye wathumela iintyatyambo zeLarissa njengesibonakaliso sokuxolelana.
Emva kokufumana ientyatyambo, isipho kunye nokuthotywa kwe-fan in the kit, le ntombazana yancincila kwaye yaxolela "i-scoundrel".
Ngesinye isikhathi, ngexesha lesinye isikhalazo, lo mfana wayeziphatha ngokungavumelaniyo. Akazange abize kwaye akazange afune iintlanganiso. ULarissa wayekhathazekile.
Intombazana yahlupheka, kodwa ingcamango yokubiza lo mfana, yayibonakala iyingozi kuye: "Ukuba ndiyimbiza, uya kucinga ukuba ndimfuna ngokwenene."
Ndiyabuza, kodwa kutheni ndidibana nomntu ongafunekiyo? Yaye ukuba naye, akafuni ukubonisa ukuba uyamdinga? Akunalo ulwalamano, luyindawo yokudlala iipopi!
Ngokubanzi, uLarissa akazange afune ukuzibuza yona yonke le mibuzo ebalulekileyo, kodwa waqhubeka ekhubeka. Ngenxa yoko, umfana waphela ngonaphakade kwi-horizontal yakhe, wayeka ukuxhasa kunye nokunyusa iRarina.
Izizathu zokuhlambalaza akukona nje ngomnqweno wokufumana imbuyekezo yokuziphatha okanye yempahla.
Enyanisweni, uLarissa ungobugovu kakhulu ukuba nayiphi na ukuphazamiseka evela kumntu wakhe sele ibonakala njengento yokuthuka .
Akunakwenzeka kuye ukuba acinge ngantoni na. Abantu abanako ukufumana iingxaki kunye neengxaki, ngaphandle komntu wakhe!
Ndimele ndithi amanye amantombazana alawula ukugcina indoda kwinqanaba ixesha elide usebenzisa le ndlela yokuphatha.
Ngendlela, amadoda anesimo somsebenzi onovakalelo kunye necala kunye necala liza kwi-hook. Ngokuqhelekileyo i-bouquet efanayo izuzwe ngumama oziphatha ngendlela efanayo.
Ii-Bedolages abaziqondi ukuba kukho olunye ulwalamano. Qaphela ukuba lo "mama" kulula: ukuba ufuna into ethile evela kwindodana yakhe, kwaye uxakeke kwizinto zakhe, ngokukhawuleza unesifo senhliziyo okanye ukuphazamiseka kwemizwa.
Ukuba unomhla, uya kubiza unyana wakhe ngamaxesha amaninzi ngeyure ukuze afune ukuba wenza ntoni, kwaye akhalaze ngempilo embi, engakhohlwa ukunyusa ukuba uyedwa wedwa.
Isizathu senombolo 2: ukukwazi ukubonisa iimvakalelo
Olu hlobo lentshukumo lwenzeka rhoqo. Cinga: ukuba sicela umntu ngokuthe ngqo, sakha, kwaye xa sizama ukunyanzelisa umntu ukuba enze into ethile (kwaye kaninzi ngaphandle kokubonisa iminqweno yethu yokwenene), ngoko sisebenzisa ukunyanzelisa .
Kwaye sikwenza oku ngenxa yokuba asiqinisekanga kuthi kwaye sinoyika ukubonisa iimvakalelo zethu zokwenene.
... U-Zoe wayekunzima kakhulu ukufumana ulwimi oluqhelekileyo kunye nabahlobo bakhe. Akakwazanga ukujoyina nayiphi na ingxoxo, kuba akazange abelane ngeminqweno yabo nonke.
Ngokuqhelekileyo wayefuna ukuba yinkxalabo yakhe kuphela, kuba yindlela ahlala ngayo kulula. Ngaba ucinga ukuba wayemxelele ngokuthe ngqo ngoku? Akukho! Kutheni uhlazo kangaka!
Kunoko, wafumanisa iimpawu zokuqala zokuthi uMichael - obizwa ngokuba ngumfana wakhe-wanyathelwa kwingxoxo ngenkuthalo, waqala ukuyibuza aze acele into ethile. Umzekelo, uthenge ice cream.
Wayengafuni ukuphazamiseka kwaye wanikezelwa ukuyithenga kamva okanye ukuthenga i-ayisikrimu ngokwayo - ngakumbi ekubeni intente ihamba ngamanyathelo amabini. U-Zoya, ngokuqinisekileyo, waphazamiseka ngokukhawuleza.
Emva koko, uMikhail wayeka zonke iingxoxo kunye nabahlobo kwaye wagxininisa ngokucacileyo ekucaciseni ubudlelwane noZoya.
Esikhundleni sokutsho ngokuthe ngqo ukuba akanakonwaba kunye neenkampani zabahlobo bakaMisha aze amcele ukuba ancede athathe inxaxheba kwingxoxo, uZoya wakhetha ukumnaka ngengqumbo.
Kulula kakhulu ukusho ukuthi "Awuthandanga" kwaye uyaphukisa kunokuba uchaze oko akuthandiyo ngokuziphatha komntu othandekayo, yiyiphi imbonakalo yothando okulindele kuye.
Isizathu # 3: ukuzithoba
Isisombululo esihlala sisisombululo ngeendlela zokuhlambalaza singabonisa ukuzithoba.
Umntu-endaweni yokubuza malunga nento ethile - uqala ukucinga kwaye uxabise ukuhlambalaza ngokuphindaphindiweyo.
Ngokomzekelo, uAsya intombazana ekhulile, wayekade ecinga ukuba abantu banjengabantu abancinci.
Ngoko ke, xa umfana wakhe uSasha ebeka ingqwalasela kumntu ogqithiseleyo, uphazamiseka ngoko nangoko.
Zonke iziqinisekiso zikaSasha zothando olungunaphakade alusebenzi kwi-Asya nonke. "Awufuni ukucaphukisa, ngoko uxoka!" Uphendula.
Ukuba unesizotha esincinane, wena kunye nokugqithiswa kwe-maniac kuya kuba nayiphi na imeko ukujonga izizathu zokuqinisekisa kwayo kwaye, ngokufanelekileyo, ngenxa yamatyala amasha.
Kunzima kakhulu ukunxibelelana nabantu abanjalo, kuba awunakukwazi oko bangakucaphukisa malunga nexesha elizayo . Nokuba ukuncoma kungabangela ukucaphukisa okukhulu.
Isizathu sombolo 4: ukwesaba ukuba "yimvu emnyama"
Ukwesaba ukungquzulwano, ukwesaba ukungaqondwa kakuhle, kuqhutyelwa abantu kwisisombululo esincinci kwimicimbi enomdla.
Ukucaphukisa kulula kakhulu: ngenxa yoko, ukuzimisela nokukhula komzimba akufunwa nhlobo.
Ukuhlambalaza abantu abanjalo bahlala bodwa kwaye baqokelela iminyaka . Yaye ukuba kukho imeko efanelekileyo, zonke ezo "butyebi" ziphuma ngendlela yokunyaniseka kwangempela.
Ngaba kufuneka ndisebenzise ukucaphuka njengesixhobo?
Ngelishwa, ngokukhawuleza wathola ukunyaniseka kwakhe, umntu uqala ukuyisebenzisa njengesikhali sakhe esihlala sisigxina, kwaye ubuhlobo buba yindlela echanekileyo yokuphathwa.
Ngokuqinisekileyo, kuyinto enhle ukufumana okufunwayo (umzekelo, ingqalelo, ukuqinisekiswa kothando, isambatho esinobuchopho obutsha okanye i-ringlet), kodwa akusiyo yonwabile xa ukunyaniseka nokuthembela kushiya ubuhlobo. Izikhalazo rhoqo zifakazela ukungakwazi ukuthetha nomlingane.
Ukuba ulwaphulo luphendukela kwisenzo esivamile somzimba wakho, ngoko abantu baqala ukuqamba amanga kuwe kaninzi okanye bathule.
Benza oku kuba besaba ukukukhubekisa. Ngaloo ndlela, ukungathembeki kukhula phakathi kwabantu. Yaye uthando kumoya onjalo uyafa.
Ngoko ke, ngaphambi kokuba ufune ukuzonda, zama uhlangothi kunye nomnye umntu kwaye ufumane izizathu zokuziphatha kwakhe.
Yiba yinto ecacileyo - funda ukucacisa kumlingane oko kukutshutshisayo ngokuziphatha kwakhe - kuba ngale ndlela uyinika ithuba lokutshintsha yonke into.
Inkathazo yabesifazana iminyaka engamashumi amathathu
Ngokuqhelekileyo, ukwesaba kuvela ekungazi - oku kuqinisekiswa kuwe nayiphi na isazi sengqondo
Iindlela zokukhusela iingqondo zeGestalt
Ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi waseJapan
Indlela yokuqaphela ubuxoki ngemisebenzi yabantu
Ubiza umntu ukuba yintoni na oku kuthetha ntoni?
I-Casserole kwi sipinashi kunye nama-artichokes
Ukunyaniseka kwezingane: ezintathu zokufumana umzabalazo osebenzayo
IBrussels ihluma ngamakhowe
Inkukhu kwi-pepper sauce
Indlela yokukhupha inkukhu yenkukhu
Intlanzi kunye ne-peach sauce
Amakhukhi e-Cinnamon Snickerdulls
Ingaba umfazi uyavuya xa engenabantwana?
Uxinzelelo olufihlakeleyo: fumana kwaye uphephe!
Yiyiphi inja yokuzalisa indlu yangasese?
Ikhekhe leSand ne ziqhamo
UBawo Frost ngezandla zakhe - ezenziweyo zephepha, iiglasi, iibhotile zeplastiki, izithambiso ze-kapron nezinye izinto ezilungiselelwe. Indlela yokugubungela isambatho se-Santa Claus kunye nesilevu: iiklasi zeeklasi kunye neepateni
Yisiphi isicatshulwa esilungileyo esilungileyo kwezandla zakho?
Apple pie Kosa
Isitifiketi somnqweno somthandayo ngezandla zakho